Haweenka Soomaalida Amsterdam oo ku soo baxay khilaafka masjidka Quba [VIDEO NEWS] - Somnieuws.com
Qaar ka mid ah gabdhaha & hooyooyinka Soomaalida ee ku dhaqan Amsterdam & agagaarkeeda ayaa xalay kulan kula qaatay magaaladaasi xubno ka tirsan Guddiga xalinta khilaafka masjid Quba ee fadhigoodu ahaa Amsterdam & Iimaamkii masjidka Shiikh Suldaan Gasle oo ahaa garab ka mid ah labada daraf ee uu khilaafku u dhexeeyay.
Kulankan oo looga wadahadlay arrimihii ugu dambeeyey ku soo kordhay qadiyadda masjidka Quba, waxaa soo agaasintay Marwo Sucaad Cabdi oo ka mid ah hormuudka hooyooyinka Soomaalida.
Shiikh Suldaan Gasle, oo kulankaasi ka hadlay ayaa si qoto-dheer kaga faalooday shareecada & cadaaladda, wuxuuna beeniyay eedeymo ay horay ugu jeediyeen Guddi odayaal ah oo fadhigoodu ahaa Tilburg.
Shiikh Suldaan hadaladiisa oo u badnaa kuwa duur-xul ah, wuxuu iska daadafeeyay eedeyn ay horay ugu jeediyeen guddigii odayaasha Tilburg ee khilaafkan ku soo baxay oo labadii dhinac ee Shiikhu ka mid ahaa ay u madax-dhiibteen xilligaasi; Guddigaas oo baaritaanno iyo kulamo 4 billood soconayay ku soo gabagabeeyey in Shiikjh Suldaan ay ka gar-leeyihiin dhalinyarada ay is hayeen.
Shiikh Suldaan ayaa 14kii bishii September amar lagu siiyey inuu masjidka Quba oo uu iimaam & Guddoomiyaha maamulka ka ahaa isaga guuro, waxaanna arrintaasi markii ay soo shaac-baxday soo buuxiyay afaafka hore ee masjidka qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida kuwaas oo ka dhiidhinayay in waddaadka ay masjidka ka cayriyaan qaar ka mid ah ardaydii uu wax soo baray.
Murankii & sawaxankii ka dhashay doodda tegitaanka & joogista Shiikha oo taagan ayaa waxaa arrinta ku soo baxay ciidamo boolis ah, waxaanna la go’aamiyay in Shiikha maadaama laga saaray waxa loo yaqaan KVK oo ah Rugta lagu diiwaangeliyo ururada & hay’adaha dalkan inuu isaga tago masjidka.
Sida Shiikhu kaga tegay masjidka waxaa si weyn kaga carooday dadkii Soomaalida ahaa ee ku xirnaa masjidka; kuwaas oo u arkay xadgudub & meel ka dhac aanu Shiikhu mudneyn in lagula kacay.
Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa masjidka ku haray xubnihii kale ee guddiga masjidka, iyada oo ay si caadi ah ku soconayeen adeegyadii uu masjidku u hayay mushtamacyada muslimka ah, hasse ahaatee 3 toddobaad kaddib ayaa laga warhelay Shiikh Suldaan in lagu soo celiyay KVK.
Sida uu Shiikhu sheegay, Garyaqaankiisa ayaa kula taliyay mar haddii lagu soo celiyay KVK inuu masjidka ku laaban karo.
Maalin Jimco ah ayaa laga war-helay Shiikh Suldaan oo masjidka dib ugu soo laabtay, waxaanna mar kale soo shaac baxay walaac la xiriira in haddii boolisku ku soo baxo khilaafka masjidka suurtagalnimada in masjidka la xiro.
HOOS KA DAAWO Khudbadii uu jeediyay Shiikh Suldaan Gasle
Kulan dhexmaay gabdhaha Soomaalida, Guddiga xalinta khilaafka masjid Quba & Shiikh Suldaan Gasle – YouTube
Aqoon-isweydaarsi 10 cisho ka soconayay Turki, oo la soo gabagabeeyey [SAWIRRO]